[24 / 01 / 2020] Fihenam-bidy haingam-pandeha haingana kokoa	Ankara 06
[24 / 01 / 2020] Hangatahana avy amin'ny BTS hamindrana ny varotra tapakila TCDD amin'ny sehatra tsy miankina	Ankara 06
[24 / 01 / 2020] Shift2Rail Info Andro Hetsika natao	Ankara 06
[24 / 01 / 2020] Ireo fiara fitateram-biby amin'ny lalana ao Kocaeli	41 Kocaeli
[24 / 01 / 2020] Inona no atao hoe Metrobus?	34 Istanbul
Andro: 14 Novambra 2019
Ady Vehivavy any Metro
Ady an-telefaona vehivavy ao anaty lalamby
Istanbul Taksim Tram sy Vehivavy mandeha an-tongotra
Nalainay ny Istanbul Taksim Tram ary ny horonantsary mandeha an-tongotra ho anao
Ny fananganana orinasa lehibe fiaran-dalamby Adapazarı; isan-karazany Electric Railway Series sy Urban dalamby ao Torkia tsy misy ny teknolojia mba hahatonga ny famokarana ny fiaran-dalamby haingam-pandeha fiaran-dalamby haingam-pandeha sy ny mpanazatra milentika amin'ny Transport Fiara [More ...]
Sambany teto amin'ny firenentsika tamin'ny tetik'asa lalamby, tao anatin'ny tontolon'ny fandaharana TUBITAK 1007, mba hamolavolana ny rafitra famantarana famantarana avy any ivelany; National National Railway Signal Project (UDSP) amin'ny fiaraha-miasa amin'ny TCDD, TÜBİTAK BİLGEM ary İTÜ [More ...]
Tian'ilay indostrian'ny lojika ny fanaovana digitalization. Betsaka ny fanombohana, izay nahita ireo filàna, no niditra tao amin'ny sehatra ary nitondra ny boky sy ny asa ho an'ny nomerika. Ny Startups dia manolotra serivisy izay tsy mbola nomen'ny fiara fitaterana [More ...]
Mersin, Railway ary Airport mankany Shift Up; Ben'ny tanànan'ny Toroslar Atsız Afşın Yılmaz, izay Filohan'ny serivisy ihany koa ny serasera ho an'ny fizahan-tany any Mersin sy ny manodidina azy, ao amin'ny Fiadidiana ny Taona 2020 [More ...]
4.International Travelexpo fizahan-tany sy fitsangatsanganana fitetezana natao tany Ankara; CD TCDD dia nandray anjara tamin'ny 4 Tourism Travel Travel 14 tany Travelexpo International Tourism and Exhibition ATO Congresium any XNUMX tamin'ity taona ity [More ...]
Lisy Bus vaovao roa avy amin'ny ESHOT; Ny talen'ny jeneraly ESHOT dia nanatitra lalana vaovao ho an'ny bisy vaovao ao Izmir. Novaliana ny fangatahan'ny fiara fitateram-bahoaka nataon'ny mpianatra IZTECH ao amin'ny Izmir Meeting. Mpandeha mpandeha ary [More ...]
1. Kongresy sy fampirantiana arabe azo tany Ankara; Eo ambany fiahian'ny ny Minisitry ny Fitaterana sy ny Fotodrafitrasa, Tale Jeneraly ny lalambe (KGM) sy Torkia simenitra Manufacturers Association (TCMA) sy ny Eoropeana Concrete Lampivato Association (EUPAVE) teknika [More ...]
Nanomboka tamin'ny Facilitiesambaşı Doğa Facilities ny fananganana Bungalow; Tafiditra an'habakabaka Nambaşı Plateau ririnina sy Ski Centre any amin'ny lemaka misy ny tafika 2 arivo an'ny tafika. Mehmet Hilmi Guler toromarika [More ...]
Nanana xnumx'üncü ny Erzurum any Torkia Fitaterana; Ny kaominin'i Erzurum Metropolitan dia milalao toerana ambony amin'ny serivisy fitaterana ihany koa. Torkia Nitarika manerana "izy ireo Metropolitan Fitaterana Performance" naka toerana fahatelo ao amin'ny Kaominina fikarohana. Fandraisana amin'ny fampiononana [More ...]
967 487 arivo sy iray alina ny olona any Las Vegas tamin'ny mponina ny fitaterana amin'ny alalan'ny famitana ny fiovam-po isan-jato ny tahan'ny 96 haingana araka izay azo atao ny mamela ny fiovam-po ny Mugla ao Torkia Metropolitan Monisipaly sy Special Fitateram-Bahoaka (Otte) hatreto [More ...]
Napetraka teo amin'ny biraon'ny finday natsangana teo amin'ny Lalan'i Salim Dervişoğlu; Kocaeli Metropolitan Munisipaly, faritra maitso toa ny promenade, zaridaina ary zaridaina, ary koa ny fitaovana an-tanàn-dehibe ilaina ao afovoan-tanàna [More ...]
Ny lalana Iron Silk dia handalo an'i Iran; Ny lalamben'i Iran dia voarohirohy amin'ny tetikasan'ny One Generation One Way any Chine. Raha niresaka tamin'ny National Channel, minisitry ny fitaterana ary ny tanànan'ny tanànan'i Muhammad Islami, lalana iray [More ...]
Fihenam-bidy haingam-pandeha haingana kokoa
Hangatahana avy amin'ny BTS hamindrana ny varotra tapakila TCDD amin'ny sehatra tsy miankina
Ny isan'ireo tranobe maintso mba hitombo miaraka amin'ny Rafitra fanamarinana maintso eo an-toerana YeS-TR
Fampidirana ny minisitra ho an'ny fidirana an-dàlana ao Sakarya sy ny tetikasan'ny lalana roa
Fivoriana isan-taona isaky ny mpikambana
Janoary 29 @ 08: 00 - Janoary 31 @ 17: 00
Janoary 29 @ 09: 30 - 10: 30
Fanamarihana Tender: Hihoatra ny Ulukışla Boğazköprü Line KM: 58 + 360
Janoary 30 @ 10: 30 - 11: 30
Ny masoivoho momba ny fampandrosoana andrefana dia handray mpiasa
I Derbent dia ho lasa toeram-pisotroana sahirana lehibe noho ny fiaran-dalamby
Nanomboka ny Alahady Krismasy Festivalambaşı
Voamarika ao amin'ny Fivoriambe eo anelanelan'ny ERÜ sy Erciyes Aş ny protocole de careerer
Sapanca Cable Car Project dia mitohy avy any amin'izay ilany ankavia
Polisy Gauntlet ho an'ny lehilahy izay mitaingina Metro eny ambanin'ny tany ho an'ny vehivavy
Tetikasa YHT Ankara Sivas Taorian'ny Ministeran'ny fitaterana
Ny fiara an-trano dia mety ho tsara amin'ny fanodinana fiara mitondra fiara
Istanbul Adalar dia navotsotra tamin'ny fako
Ny fiara an-trano dia hampitombo ny fitaovam-piadiana miaraka amin'ny BUTEKOM
Ny zava-dehibe dia tsy ny famokarana fiara an-trano, fa ny hametrahana ny sehatry ny varotra varotra
Vaovao Tsara ho an'ny mpiasan'ny TCDD! Ny vola fampiroboroboana dia atokana amin'ny kaonty
Famerenam-bokatra TCDD amidy! Tsy olana ny fanaovana samirery
Renault Trucks dia manolotra ny fandefasana lehibe voalohany azy amin'ny taona amin'ny Netlog Logistics
KIA Fiara mandeha herinaratra
Ny fiara mandeha an-toerana dia azo havaozina amin'ny Internet amin'ny alàlan'ny fiara mpitondra fiara
Denizli Izmir Train Times Map sy ny vidin'ny tapakila